Home Wararka Guddoomiyihii SEIT GALMUDUG oo xilka laga qaaday iyo mid cusub oo la...
Guddoomiyihii SEIT GALMUDUG oo xilka laga qaaday iyo mid cusub oo la doortay
Guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug oo maanta yeeshay kulan aan horey loo sii shaacin ayaa ku dhawaaqay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii guddigaas Maxamed Daahir Guuleed.
Guddiga ayaa sheegay in dood dheer iyo falanqeyn kadib ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyihii guddiyada doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed.
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay inay guddoomiye cusub u doorteen Maxamed Qaasim Maxamuud. Guddoomiyaha cusub ee la doortay ayaa horey u ahaa xoghayaha guddigaas.
Guddiga ma uusan sheegin sababihii keenay inay xilka ka qaadaan guddoomiyihii guddiga doorashada ee Galmudug.
Dhinaca kale, Maxamed Dahir Guuleed ayaa sheegay inaysan jirin xil ka-qaadis lagu sameeyey, wuxuuna beeniyay Warqadda Guddiga, isaga oo intaas ku daray in aanay jirin shir guddiga doorashada Galmudug oo dhacay.
Tallaabada uu qaaday guddiga doorashada Galmudug ayaa kusoo aadeysa xilli ay madaxda maamul Goboleedyada iyo Ra’isul Wasaare Rooble ku heshiiyeen in 15 January dib loo bilaabo doorashada xubnaha Golaha Shacabka.
Tallaabadan ayaa horseedi karta caqabad iyo loolan cusub oo dib u dhigi kara in doorashada dalka lagu soo dhammeeyo waqtigii loo qabtay. Galmudug ayaa ah maamulka uu hareeyey musuq-maasuqa ugu badan ee lagu sameeyey doorashada kuraasta Golaha Shacabka.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka kasoo baxay guddiga
Previous articleGuddiga Doorashada Heer Federaal oo ku dhawaaqay Doorashada Gudoomiye cusub (Guddi la magacaabay)
Next articleMuxuu ku soo dhammaaday kulankii Rooble & Guddiga Doorashada
[Daawo] Wasiir Jamal Xasan & Xil. Cali Xoosh oo soo abaabulay...